Kitaabni waa'ee Obbo Ermiyaas Amalgaa barraa'e maal hima? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Anteneh Yigzaw
Jalqaba torban kanaatti kitaabni mata duree 'Yemaayisabarawu' jedhamuun barraa'ee fi waa'ee seenaa jireenya Ermiyaas Amalgaa himu tokko eebbifameera.
Obbo Erimiyaas biyyaa bahuu fi deebi'ee hidhamu isaatiin kan adda cite ture kitaabni kun barraa'ee xumuramuuf waggaa torba fudhate.
Waa'ee kitaabichaa fi attamiin akka maxxanfame ilaalchisee barreessaan kitaaba kanaa Obbo Antenah Gizaaw BBC waliin turtii taasiseera.
Kitaabicha barreessuuf jalaqaba yaadni eenyu biraa madde?
Obbo Antanah፡ Yaadichi kan madde Obbo Ermiyaas biraa ture. Karaa nama duraa waliin hojjataa ture tokkootiin akkan seenaa jireenyaa isaanii barreessuuf akka barbaadan natti himan.
Kun kan ta'e ALI bara 2003 ykn jalqaba 2004 natti fakkaata.
MM Abiy kitaaba 'Satatee' jedhamu barreesusu isaanii ifatti amanan
'Nama biyya Oromoo' jechuun kan of himan Abbaa Gammachiis eenyu?
Isaan boodas ragaa qixeeffachuu fi namoota gaaffii taasisuuf qopheeffachuun eegale. Isaan boodas namoota dubbisee sana barreessuutu narra ture. Isaan boodas gara bara 2005 fi 2006 xumuramulleen hojiichi yeroosuma adda cite.
Maaliif adda cite?
Obbo Antanah: Osuma wixinee jalqabaa qopheessaa jirruu haala Akisas Riil Istate waliin wal qabateen Obbo Ermiyaas biyyaa bahe. Waggoota lamaaf biyya Ameerikaa fi Dubaayi turuun gara biyyaatti wayita deebi'eetti maalif itti hinfufne naan jedhee, achumaan hojii barreessu eegale.
Rakkina Aksasiin wal qabatee osoo itti hin ida'iin seenaan Obbo Ermiyaas seenaa guutuu hinta'u. Kanaafuu, tibba biyyaa baatee maal hojjataa turte? Attamiin gara biyyaatti deebite? Erga dhuftee hoo maal hojjattee? fi gaaffiilee kkf erga gaafadhee booda kitaaba keessa galchuun barbaachisa ture.
Kana hunda xumurree gara dizaayina kitaabichaatti osoo seenuuf jirruu ammoo ammas rakkinuma Aksas kanaan walqabateen Obbo Ermiyaas ammas Maakalaawiitti hidhame. Kitaabichis yeroo lammaffaaf adda cite jechuudha.
Kitaabichi xumurameera taanaan obbo Ermiyaas mana hidhaa seenus maaf maxxanfamuu dhabe?
Obbo Antanah፡ Sababiinsaa ani isa argachuu hindandeenye. Mana hidhaa keessatti abbaa, haadhaa fi obboolaasaa malee namoonni gara biraa dubbisuun hin hayyamamuu ture.
Anis seenaa kana eegalu malee akka itti fufnuuf nuuf hin hayyamamne jechuun dhiiseen ture.
Isaan booda hoo attamiin hojiisaa eegalteere?
Obbo Antanah፡ Ammas erga hiikamee booda naaf bilbile.
Siif bilbile maal siin jedhe?
Obbo Antanah፡ Kitaaba kana itti fufuu qabna naan jedhe. Mana hidhaa keessatti eenyu fa'i waliin akka ture, maal gochaa akka ture? Attamiin akka hiikame kanneen jedhan ilaalchisuun boqonnaa haaraan itti dabale.
Oolmaa barreessitoonni Oromoo guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif oolan
Walaloo Seeneet Gizaachoo eenyutu barreessaaf?
Ammas hojii keenya xumuraa osoo jirruu, haala gurgurtaa hoteela Impeeriyaaliin wal qabate ammas Obbo Ermiyaas hidhaatti deebi'ee.
Anaaf haalichi baay'ee naasisaa ture. Bara 2004 kan eegalamee kitaabni kun ammas yeroo sadaffaaf adda citusaatiin abdii kutadheen ture.
Dhumarratti kitaabni kun attamiin maxxansaaf gahe?
Obbo Antanah፡ Guyyaa tokko bakka Obbo Ermiyaas itti hidhamee jiru mana hidhaa Qilinxootti na waamsise. Egaan kitaaba kana ati asiin geessee jirta naan jedhe.
Ani barreessee kan ture hanga mana hidhaa Maakalaawwiiti hiikamee qofaa ture. Ergan Qilinxoo seenee booda kan jiru anuu nan barreessa. Kan ati barreessite qofaan haa maxxanfamu naan jedhe. Kanarratti waliigalunis kitaabichi gara mana maxxansaa seene.
Amma Obbo Ermiyaas turtii isaa kan Qilinsoo barreessaa jiruu?
Obbo Antanah: Dhimmi Qilinxootti isa galche dhimma gurgurtaa hoteela Meetek/Impeeriyaalidha. Isa achuma Qilinxoo taa'ee mata duree waraaqaawwan qorannoo kudhan jedhun maxxanfamani onlaayinii Amaazon gubbaa jiru.
Torban muraasa booda Itoophiyaa seenu. Kunis, Afaan Amaaraatti mata duree 'Itoophiyaa daandii qaxxaamuraa irratti' jedhun maxxanfamee gabaaf dhihaata.
Kitaaba ''Yammaayisabbaraw'' jedhu osoo hin maxxanfamin dura Obbo Ermiyaas dubbiseeraa?
Obbo Antanah: Mana hidhaa geessaa akka gulaalamu ta'eera. Si'a shan keessa ilaaleera.
Abukaatoo isaa dabalatee Ermiyaasin akka agarruuf namoota eeyyamameefi shan keessaa tokko ana waan ta'ef inni dubbisaa ture.
Wanti sirraa'us erga sirraa'ee boodadha kan maxxanfame.
Kitaabichi maaliif amma maxxanfame? Obbo Ermiyaas hidhaa waan jiruf dhiibbaa uumuufii?
Obbo Antanah: Kitaabicha barreessuun yeroo sadii adda cite. Irra deddeebbiin hidhamee hiikamuun isaa mata duree isaa dabalate wanta kitaabichi irratti xiyyeeffate akkan jijjiiru na dirqe.
Kitaaba waggaa 4 ykn 5 dura maxxanfamuf qophaa'e ture. Amma dhiibbaa homaatu uumuuf miti. Osooma jennu ammallee maxxansiisuf hin feene ture.
Obbo Antanah: Dhiibbaa Obbo Ermiyaasiini. (Amma maxxanfamuu qaba. Kutaa jalqabaa ati barreessi, isa lammataa ani nan barreessa) naan jedhe.
Image copyright Antenh Yigzaw
Kan kitaabicha maxxansiise eenyu?
Obbo Antanah: Ermiyaas Amalgaa
Koppii meeqatu maxxanfame? Baasin bahewoo?
Obbo Antanah: Koppii kuma kudhanitu maxxanfame. Waa'ee baasii amma dubbachuun nadhiba.
Kitaabni kun waggaa torba sitti fudhatee?
Obbo Antanah፡ Eeyyeen irra deddeebiin adda citu isaatiin waggaa torbaaf tureera. Haala qopheessuu kitaaba kanaa keessatti danqaan kiyya olaanaan haaluma qormaatawwan jireenya obbo Ermiyaas waliin adeemuu ture.
Jireenyi isaa yeroo hundumaa fixaan bahiinsaa fi kufaatiiwwan haaraan kan gutameedha.
Biyyaa bahuu, fi hidhamuu ture. Kanaafuu xumure yoo jettu seenaa gara biraa dabalatee dhufa. Akkas ta'eeti malee kitaaba barreessu qofti waggaa hanga kanaa fudhatee miti.
Afaan: Olmaa barreessitoonni Afaan Oromoofi Tigree guddina ogbarruu Afaan Amaaraatiif oolan